Kedu ụdị ụdị ABS dị iche iche? - Azịza Kacha Mma
Isi > Azịza Kacha Mma > Ofdị abs - azịza dị mfe maka ajụjụ
Ofdị abs - azịza dị mfe maka ajụjụ
Kedu ụdị ụdị ABS dị iche iche?
Kedu ihe na-eme ụmụ okorobịa? Jeff Cavaliere, ATHLEANX.com. Dị njikere ịchọpụta ihe ọdịnihu gị bụ taa? You nwere ikike ịnwe mkpọ 8? Taa, aga m egosi gị ule dị mfe ị ga - eme iji chọpụta ya.
M ga-emekwa ụbọchị gị ụtọ ma ọ bụ mebie ụbọchị gị. Ma rapara na ya. Ule ahụ.
Ihe ikwesiri ime bu ka ijiri aka gi - ugbua enwetara m ya. Enweghị m ọtụtụ ihe m na-adọta ebe a. Y’oburu n’inwere otutu ihe ebe a n’enweghi ike itinye aka gi, ule a nwere ike ogaghi emetuta gi.
Ana m ekwu na 20% abụba ahụ na obere. Nke ahụ bụ ihe mgbaru ọsọ anyị mgbe ị kwesịrị ịmalite ule a. Yabụ ihe ị na - eme bụ ijide mkpịsị aka gị ebe a.
Mwakpo ma jigide ihe ị nwere ike ijide, banyere ọkwa nke afọ gị, mgbe ahụ mgbe ị guzoro - n'ihi na ịchọrọ ịnọ ebe a - ọ bụrụ na ị ga-apịa ka ị nọ ọdụ na ọ gaghị adị irè. You na-ebili, ugbu a ị na-emegharị ahụ gị, ị na-adọpụ aka gị otú ahụ, na ị na-emegharị abs ma na-adọta ha dị ka nke ahụ. Mgbe ị na-eme nke a, ị ga-eche na akwara na-ewepụ akpụkpọ ahụ yana abụba yana ihe ọ bụla.
Kedu ihe bụ igwe kwụ otu ebe
Mgbe ahụ ị nwere ike ịkọwa mkpịsị aka gị n'ime, rụtụrụ aka na ị kwesịrị ịmalite ịkụ mkpịsị aka gị - kwenye m, nke a ga - arụ ọrụ - mee mkpịsị aka gị n'elu akwara dị n'okpuru wee hụ ma ị nọ n'okpuru mgbada afọ gị Nwee ịdị elu nke eriri afọ n'okpuru, lee ma ọ bụrụ na ị na-eche a riiji. Hụ ma ọ dị gị ka nsogbu ọ dara. Hụ ma ọ bụrụ na ọ dị gị ka ụdị nke ahịhịa na-agbada ahụ gị site n'aka ekpe gaa n'aka nri.
Ọ bụrụ na, yabụ You nweghị ikike ịnwe mkpọ e8, ọ bụrụ na i mee ya, ị nwere ikike ịnwe mkpọ 8. Gịnị ka ọ pụtara? Ọfọn, n'eziokwu, ọ dịghị ihe ọ bụla, n'ihi ụfụ ahụ ị nwere, ma ị nwere 4-mkpọ ma ọ bụ 6-mkpọ, ma ọ bụ 8-mkpọ; Ọ bụghị n’ezie nọmba ị nwere ebe ahụ. Ọ bụ eziokwu na ị nwere ikike ịhụ ihe ị nwere ebe ahụ ma nwee isi mepere emepe.
Nke ahụ kwuru, ọ bụghị naanị na abs, ị nwere obliques iji kpụọ ya, ị nwere ike nweta isi dị egwu. Yabụ nke a bụ ihe anyị ga - eme: anyị ga - ewere akara akwara wee lelee ihe m nwere ebe a, ọ dị mma? Ya mere malite site n'elu ala. Dị ka m kwuru na ị nwere abụọ nke mbụ na-amalite n'okpuru obi ma e nwere akara na-agbadata ebe a.
Ọfọn, na-akpali mmasị, m mere n'ezie - ọdịdị m gbanwere obere mgbe m nwụsịrị nke abụọ. Nke a nwetara obere obere miri emi. Ọ nwetụrụ ntakịrị ebelata.
Mana nke ahụ gafere ebe a, mgbe ahụ m ga-enwe ahịrị ọzọ n'akụkụ ebe a. Nke ahụ abatatụwala sara mbara. A na-akpọ nke a diastasis recti, ebe ị ga-enweta obere egwuregwu ebe a.
Ọzọ n'ihi hainia. Ma nke ahụ dị mma. Bata ebe a, dị ka nke a, mgbe ahịrị ikpeazụ ga-agbadata ebe a ma ị ga - ahụ na ọ na - agbago n'ogo afọ gị, gbadaa ebe a.
Ugbu a, ọ bụrụ na m mere ule a n'onwe m wee kpaa mkpịsị aka m n'akụkụ ebe a, n'okpuru ngwugwu ikpeazụ ebe a, enwere m ike ịdọrọ nke a ruo n'ókè m chọrọ ma enwere m ike ịpị mkpịsị aka m ebe a. Enweghịzi akara na-agba gburugburu mpaghara a. Enweghị m ridges ọzọ.
Enweghi ihe jikọrọ anụ ahụ. Gini bu ihe kpatara nke a? Gịnị na-akpata nke a? Muscle - rectus abdominus - kedu ebe dị ebe a; ọ dịghị adị ebe a. Genetically m enweghị ìgwè ọ bụla ọzọ ebe a.
Ma maa onye na-eme nke ahụ? Jessie, ị gaghị abịa n'akụkụ nke ọzọ nke igwefoto? Ya mere, lee mụ onwe m Jeff, kuziere Jessie ma gbalịa ị nweta ya ma ọ pụta, dọpụta nke a. Nwatakịrị ahụ nwere otu, abụọ, atọ ruo obere otu na - ee! Kedu ihe bụ nke a?! Anọ, 8-gbadaa niile ala ebe a ma ọ bụrụ na ọ gafere ebe a. Jessie ọ bụ mkpụrụ ndụ ihe nketa ugbu a? Ọ ghọrọ otu, mana nke ka mkpa bụ na o nwere usoro ọmụmụ ahụ.
I nwere ike na-eche ya. Achọrọ m ịme nke ahụ, ọ dị ntakịrị, mana enwere m ike ịnụ ihu. Enwere m ike ịtụtụ ya dị ka akwara guitar ebe a.
Ugwu a na-enye ya ohere ịpụta nsị ya, mepee, ma mepụta mkpọ ngosi nke 8 ka ọ na-aga n'ihu na-adaba na ahụ ya abụba pasent. Kedu ihe dị iche ugbu a? Ebe ọ bụ na mmepe ya dị egwu apụtaghị na ọ dịbeghị, ọ dị ka ya, ọ bụ? Ọ nọ n'ụzọ, mana ruo na etiti, t uche Ya n'ozuzu ya anya ka akọwapụtara karịa ka ọ ga-adị. Ya mere ibu ọrụ nke amaokwu anọ na isii na asatọ na-eleghara isi ihe anya na enwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ ị nwere ike ime iji zụlite ihe ị nwere. ma lee anya nke oma, ezigbo nmeko nke oma n’eme ya.
Ya mere kwụsị itinye uche na ya. Ma ọ bụrụ na ịchọrọ mkpali na-ewuli elu, chọpụta ụfọdụ n'ime ụmụ okorobịa ndị a na-enweghị 8-ngwugwu, ọ dị mma? Echere m na aha ya bụ Arnold. N'ezie o nwere - ikekwe o nwere mkpọ 5.
O nwere anọ ma otu nke na-aga n'okpuru otubo, mana ọ nweghị ezigbo njikọ. Franco Colombo, enyi ya. Ọzọ, anyị anaghị achọ 8-packs ma ọ bụ na-ekwu maka 8-packs ma ọ bụ ọbụna nwoke ahụ a maara na ọ fọrọ nke nta aesthetically zuru okè, Frank Zane.
Ngwugwu. Ma echiche bụ nke a: ha niile dị mma, ị nwekwara ike ịdị mma nke ọma ma ọ bụrụ na itinyeghị ọnụ ọgụgụ. Ekwela nkụda mmụọ n'ihi na m lere ule a ma enweghị m ike ịnwe obere ìgwè ikpeazụ nwere ike.
Gịnị mezie? Belata ahụ gị na-arụ ọrụ na ihe ị nwere ebe a. Cheta na m na-enye gị mkpụrụ ndụ ihe nketa ule maka. Egosiputa biceps? Ọ bụrụ na itinye mkpịsị aka abụọ ebe a, a ga-eche na ị ga-enwe obere biceps.
Ysmụ okorobịa, chefuo ihe nzuzu ahụ niile '. Nke ahụ ezighi ezi. Ọ bụrụ n’ịzụlite ihe ị nwere, kwenye n’ihe ị nwere, ma rụsie ọrụ ike, ị ga-enwe ike ile anya nke ọma.
Dị ka Jessie. Ọ dị mma ịpụ ebe a obere nwa nkịta, enweghị m ike ikwenye na o nwere mkpọ 8 ma enweghị m. Nke bụ eziokwu bụ, ụmụ okorobịa, ọ bụrụ na ị na-achọ mmemme nke ga-ekepụta nri na-edozi ahụ nke ga-ahazi gị mgbe ọnụọgụ anụ ahụ gị dị ala nke na ị ga-ahụ ihe ị nwere ebe a, gafee ATHLEANX.com.
Nweta otu n’ime mmemme anyị. Jiri ndị na-ahọpụta ihe omume anyị site na ịpị njikọ dị n'okpuru isiokwu a, anyị ga-emezigharị mmemme ahụ nke kachasị mma maka ebumnuche gị. Ka ọ dị ugbu a, ọ bụrụ na ị chọpụtala na isiokwu ahụ na-enye aka, hapụ ihe gị na isi aka gị n'okpuru.
Hapụ ihe ị ga - eme ebe a n’isiokwu ndị ga - eme n’ọdịnihu, m ga - emekwa ike m niile ị meere gị ya ụbọchị na izuụka na - abịa. Ọ dị mma, lee gị.
Kedu ihe kpatara ụdị ABS dị iche iche?
Kedu ihe dị iche n'etiti abụdị?
Rectus okpoko Ozugbo toned, rectus abdominis ga-abụ mkpọ gị anọ, isii, ma ọ bụ asatọ.
Na-agafe. A na-ehichapụ abdominis miri emi n’afọ.
Obliques ime na mpụga.
Ọ ga-ekwe omume ịnweta mkpọ 10?
Ọgọst 29, 2019
Ego ole ka ha dị?
Ọ niile na-agbadata na mkpụrụ ndụ ihe nketa. Ahụ onye ọ bụla bụiche iche, nke na-akpataiherectus abdominis (aka ndị ọkpọ isii ahụ) dị iche maka onye ọ bụla, ka Noam Tamir, CSS.S., onye isi na onye guzobere TS Fitness na-ekwu.n'imeObodo New York. Inwe ihe omuma ma obu ihe omumaNgalabametụtara mkpụrụ ndụ ihe nketa gị, ”ka Tamir na-ekwu.Abụọ 23, 2021
Anyị enwere 6 ma ọ bụ 8?
Mmetụta 4 dị iche iche nke mejupụtara gịNgalaba. Onye ọ bụla n'ime akwara 4 a nwere ọrụ dị iche iche, mana nke dị mkpa - yabụ ịchọrọ ijide n'aka na mgbatị gị na-azụ ha niile nke ọma.
Ndi na-adọrọ adọrọ?
N'ime ihe ọmụmụ (ọ bụghị nke ajuju) nke Mahadum Western Illinois mere, ụmụ nwanyị gosiri akaraNgalabadị ka anụ ahụ kacha nwee mmekọahụ na ahụ mmadụ, ThePostGame.com na-akọ. Kechioma n'ihi na ị, ị nwere ike sculpt gịNgalaba; enweghi ihu oma dika igbanwe iru gi. Na iji mara mma, ọ bụghị na ụmụ nwanyị adịghị emighị emi.
Kedu ihe ịrịba ama mbụ nke abs?
Uwe ọkpa gị na / ma ọ bụ nke dị mkpụmkpụ na-atọpụ n'úkwù.
Ọ bụ ụzọ kachasị mfe ma dịkarịrị mfe ịchọpụta ọganiihu gị na njem ị na-aga ime afọ mmiri. Ọ bụrụ na uwe ogologo ọkpa gị dabara adaba ma ọ bụ ọ bụrụ na ị ga-emechi eriri gị, yabụ afọ na-efunahụ gị.Julaị 13, 2015
Onye ọ bụla nwere nchịkọta 6 n'okpuru abụba?
Enwere okwu a mara mma nke na-aga ihe dị ka nke a: 'Onye obulanweremkpọ isii, n'ihi na ọtụtụ n'ime anyị kpuchie ya. ' Ọ bụ eziokwu.Otu mkpọbụ naanị mọzụlụ afọ gị (rectus abdominus) n'okpuru akwa anụ ahụ na ahụabụba.Ọnwa Ise 9, 2005
Ngwunye 6 ọ dị mma?
Ọ bụghị naanị na-akọwapụtaNgalabaọ bụghị ihe ịrịba ama nke ihe ọmaahụike, ha nwere ike itinye aka na ogbenyeahụike- karịsịa na ogologo oge. “Na-echekwaisii-mkpọabụghịgbasiri ikemaka ahụ gị, ”onye edemede na onye ọzụzụ ahụike nke onwe Leena Mogre gwara Times of India.Ọnwa Ise 9, 2019
Girlsmụ agbọghọ ọ dị ka abs?
N'ime ihe ọmụmụ (nke a na-atụghị anya ya) nke Mahadum Western Illinois mere,ụmụ nwanyịgosiriNgalabadị ka anụ ahụ kacha nwee mmekọahụ na ahụ mmadụ, ThePostGame.com na-akọ. Kechioma n'ihi na ị, ị nwere ike sculpt gịNgalaba; enweghi ihu oma dika igbanwe iru gi. Na iji mara mma, ọ bụghị nke ahụụmụ nwanyịna-emighị emi.
Ndi ABS na-agbanye?
Ọ bụchaghị. Ọ na-ewe ọtụtụ mgbalị, nraranye, na oge iji nweta mkpocha ma kọwaa ya-biko ghọta na nke a abụghị otu iheNgalaba. ” Ahụ onye ọ bụla dịtụ obere, na akwara afọ nwere ike itolite dị iche iche, dabere na mkpụrụ ndụ ihe nketa na otu esi arụ ọrụ ahụ.
Kedu ụdị akwara ị nwere maka ABS?
Rectus Abdominis: Mkpịsị abụọ nwere akwara siri ike site na ọgịrịga na pelvis nke ga-eme ka ị gaa n’ihu. (Ndị a bụ akwara isii nke 'ọtụtụ mmadụ na-eche maka enweghị isi.)
Kedu ụdị ụdị ABS m chọrọ?
1 Otu Channel, One-Sensor ABS. A na-ahụkarị ya n'ụgbọala ụgbọala na-aga n'azụ, SUVs na pikọp, sistemu a nwere otu ihe mmetụta dị n'azụ azụ iji tụọ ọsọ nke ịkwọ ụgbọala azụ 2 Channel abụọ, Anọ Sensọ ABS. 3 Ọwa atọ, Ihe mmetụta atọ ABS. 4 Atọ nke ọwa, Ihe Nleta Anọ ABS. 5 Anọ-ọwa, Anọ mmetụta ABS.
Ebee ka ndị ABS dị n’ahụ?
Zute Akpụkpọ Gị Gị Nke mbụ, obere nkuzi gbasara ahụ. Tinyere mọzụlụ dị na azụ azụ, abdominals ndị a dị n'ime mebere isi gị. Obliques Mpụga: Mpụga elu nke abs n'akụkụ gị; ndị a na-agba diagonally ala.